ဩဂုတျ 2018 – Healthy Life Journal
အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ခွဲစိတ်မှုကို စွန့်စားခွဲစိတ်ခဲ့ပြီးနောက် ကိုယ်ချင်းဆက်အမြွှာညီအစ်မ ကျန်းမာရွှင်လန်းလျက်ရှိ
၊ မိုးမင်းထွန်း ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ အသက် ၂ နှစ်အရွယ် အီရီကာနဲ့ အီဗာ ကိုယ်ချင်းဆက်အမြွှာညီအစ်မဟာ သားအိမ်၊ အစာခြေလမ်းကြောင်း အသည်း၊ ဆီးအိတ်၊ တတိယခြေချောင်းတို့ တွယ်ဆက်မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဒီဇင်ဘာလက ၁၈ နာရီကြာတဲ့ ခွဲစိတ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကလေးနှစ်ယောက်ကို...
အဆုတ်မှာ စပေါ့ (Spot) တွေ့ခြင်း
မေး. CT အဖြေအရ အဆုတ်မှာစပေါ့တွေ့တယ်တဲ့။ လည်ပင်းပြန်ရည်ကြောနားက အဖုလေးကိုခွဲထုတ်ထားပါတယ်။ ကင်ဆာဆဲလ်တော့မတွေ့ဘူး။ Lymph Node ရောင်တာလို့ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဆုတ်မှာ စပေါ့တွေ့နေလို့ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေများတာလား။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေကြားပေးပါရှင့်။ Thaw Thaw Muthar Sue (FB) ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်...
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ငယ်ငယ်တုန်းက ရပ်ဝေးက ဧည့်သည်တွေလာပြီဆိုရင် ပုဂံညောင်ဦး၊ ပုပ္ပားကို ဘုရားဖူးပို့ပေးရတတ်တယ်။ တစ်ခါသား အိမ်မှာ ဘယ်သူမှ မအားတော့ အမေတို့က (အိမ်မှာ ကားမရှိတော့) ကားငှားပေးလိုက်ပြီး ဧည့်သည်ကို လိုက်ပို့ပါလို့ အစ်ကိုနဲ့ကျွန်မကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါလေရော ....
ရေကူးပြီးယားယံနေသလား . . .
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ရေကူးတဲ့အခါ ရေကူးကန်ထဲရှိ ပိုးမွှားတွေက အရေပြားကိုကပ်ပြီး ယားယံတာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို Swimmer’s itch လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရေကူးပြီးချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ယားယံတာက ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ သူ့အလိုလိုတော့ သက်သာသွားနိုင်ပါတယ်။ ရေကူးပြီး ယားယံသော...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ဖောလစ်အက်စစ်က ဗီတာမင်ဘီ တစ်မျိုးပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ဆဲလ်သစ်တွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ ဖောလစ်အက်စစ်ကို သုံးပါတယ်။ လူတိုင်း လူတိုင်းက ဖောလစ်အက်စစ်ကို လိုအပ်နေပါတယ်။ ဖောလစ်အက်စစ်၏ အရေးပါပုံ ဖောလစ်အက်စစ်က အရေးပါတဲ့ ဗီတာမင်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ဖောလစ်အက်စစ်မှီဝဲတာဟာ...
နာတာရှည် ရောဂါရှင်တို့ တုပ်ကွေးကင်းစင်ဖို့
မေး ။ နာတာရှည်ရောဂါရှိသူတွေအတွက် တုပ်ကွေးပိုး ကာကွယ်ရေးမှာ ဘယ်လို အချက်တွေကို အထူးလိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဦးလှထွန်း၊ ဒေါပုံ။ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင်(အထွေထွေရောဂါ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည် ။ ဖြေ ။ ပြင်ပ ကူးစက်ပိုးတစ်ခုခု ၀င်လာရင်...
ဩဂုတျ လ၊ 2018 ခုနှဈ